सिलोट	सङ्गीत र साहित्यको चिन्तन-चौतारी
About Aavaas’ music/संगीत पृष्ठ
Literature by Aavaas / साहित्य पृष्ठ
Poetry recitation / कविता वाचन
अनुरागी विरागलाई सलाम !
Posted by Aavaas In music
आफ्नो धरातललाई सँधै झुकेर निहार्ने त्यो मान्छेसित मेरो पहिलो भेट २०४८ सालतिर भएको थियो । उतिबेला फ्रेन्च कल्चर सेन्टर बागबजारमा थियो । त्यहाँ आरोहणले हरेक महिना नियमित नाटक प्रदर्शन गर्थ्यो र आस्था परिवारले गीति कार्यक्रम । म आस्थामा संलग्न थिएँ । संगीत र नाटकले समाज परिवर्तनको पनि सपना देख्नु पर्छ भन्ने धारणा राख्थ्यौं हामी । त्यही सपनाको बलले नै हो सत्तालाई विपक्षी ठान्थ्यौं । हामी कडा आलोचक थियौं सत्ताका । रेडियो नेपालमा गाउनेहरू सबैलाई बुर्जुवा ठान्ने समय थियो त्यो । त्यस्तो समयमा विराग दाइको एउटा गीत सुप्रसिद्ध थियो । जसलाई नेपाली संगीत आकाशका मूर्धन्य गायक नारायण गोपालको स्वरले घन्काएथ्यो-
तिमीले पनि मजस्तै माया दिएर हेर
मायालुको सम्झनामा आफूलाई बिर्सि हेर
म त्यस गीतको फ्यान थिएँ । राम्रा गीतका गीतकार, संगीतकार र गायक को को रहेछन् ? ध्यानपूर्वक सुन्ने बानी थियो । उसबेला रेडियो नेपालले तीनैजना सर्जकको नाम नछुटाइ सुनाउँथ्यो पनि । त्यसैले उहाँलाई ‘आस्था परिवार’को कन्सर्ट हेर्न लिएर आएका विमल राल्फाले ‘भीम विराग’ भनेर चिनाउँदा म पुलकित भएको थिएँ । अग्लो कदका विमल दाइको दाहिनेतिर उभिनुभएका भीम दाइले मलाई धापमार्दै सुस्तरी गुनगुनाउनु भएथ्यो- ‘राम्रो छ ! अझै राम्रो होस् !’ भीम दाइका तेजिला आँखा मेरो मुहार हुँदै पुन: भुईंतिरको आफ्नै नियमिततामा फर्किएथे । त्यस क्षण प्रेक्षालयको साँघुरो ढोकाबाट उहाँ बाहिरिएको दृश्य मेरो स्मृतिमा यद्यपि ताजै छ ।
त्यसयता भीम दाइसित घनिष्ठता बढेको क्षणले पनि दशक पार गरिसकेछ । खासगरि पलेँटी शृंखलाले गर्दा त उहाँसितको सम्बन्ध झन् गाढा र पारिवारिक बन्दै गयो । मेरो; अझ भनौं हामीहरूको हेटौंडा आवागमनको मूल सेतु नै भीम दाइ बन्न थाल्नु भएथ्यो । पलेँटीको कुरा लिएर सुरुका दिनमा अमृत, दानु र म पुगेथ्यौं हेटौडाको हुप्र चौर । पछिल्ला वर्षमा त हामी धेरै जना त्यता नियमित जान थाल्यौं । कम्तिमा वर्षको एकखेप त हामी पुग्थ्यौं नै हेटौंडा ।
अनु भाउजू भीम दाइकी अर्धाङ्गिनी । सरल, सहृदयी र त्यागी । भीमदाइको कलाकारिताबाट प्रभावित उहाँ आफैँ पनि हुनुहुन्थ्यो गायिका । भाउजूबारे भीम दाइ भन्नुहुन्थ्यो- ‘यी मेरी प्रेमिका हुन्, श्रीमती हुन् र अझ हुन् मायाकी देवी !’ भाउजूका सामू अभिव्यक्त भीम दाइका ती वाक्यमा एउटा लोग्नेले श्रीमती निम्ति व्यक्त गर्ने सामान्य र फोस्रो प्रसंसा बोकेका हरफ थिएनन् । सत्य, यथार्थ लुकेका थिए ती वाक्यमा । गहिरो यथार्थ । त्यस यथार्थ भित्रको कथा संक्षिप्त छैन । त्यसैले अनु भाउजूको उल्लेख बेगरको भीम दाइ सम्बन्धि सम्झना अधुरो हुन्छ भन्ठान्छु । संक्षेपमै भए पनि अनु भाउजूलाई सम्झनै पर्छ ।
एक साँझ भीम दाइकै कण्ठबाट सुनेको- ‘२०१९ सालतिरको कुरा ! आसाम सिँगो छँदैको कुरा पो होला सायद । ग्रेटर आसाम भनिन्थ्यो उ बेला । सिलोङकी अनु क्षेत्री, गायिकाको रुपमा कन्सर्ट दिन भित्रिएकी थिइन् नेपाल । उनको टोलीमा अरु पनि ११ जना कलाकार आएका थिए । उनीहरूले नेपालका कलाकारसित मिलेर विरगञ्ज र मकवानपुरतिर कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उमेर खाइलाग्दो थियो । म यताका कलाकारको हर्ताकर्ता तर शारीरिक रुपले अशक्त । मेरो कलाकारितालाई चिनेर हो या अवस्थालाई; यिनी आफ्ना १० जना सहयात्रीलाई छोडेर यतै बसिन् । आजीवन साथ दिने वचन दिएर । यिनकै साथले त बाँचेको छु म । मेरो जीवन त यिनले नै हुर्काएको फूल हो भाइ !’ वाक्यहरू बिसाउनासाथ भीम विराग दाइका आँखामा गहिरो भावनात्मक छाल देखिएथ्यो । यस्तो बखत आफूलाई सम्हाल्दै वातावरणलाई हलुका बनाउन खप्पिस हुनुहुन्थ्यो भीम दाइ- ‘मेरो जीवन अनुले हुर्काएको फूल त भनेँ भाइ ! तर फूल केऽऽको ? धतुरोको या गुलाफको ? थाहा छैन ।’ हाँस्दा खिएर गिजाको फेदसम्म पुगेका भीम दाइका दाँतहरू स्पष्ट देखिन्थे ।
भीम दाइलाई भेटेको हाम्रो पहिलो महेफिल भने सोमरस वेगरको थियो । त्यसरी सोमरस बिना साँझ जमेको देखेर अनु भाउजू पनि हाम्रो प्रसंसक बन्नु भएथ्यो । त्यस साँझको बारेमा भाउजूको टिप्पणी थियो- ‘यसरी पनि त साँझ रमाइलो हुँदो रहेछ त ? अनि किन ‘हरेक साँझ रक्सिन’ पर्‍यो ?’ भीम दाइले नेपाली साहित्यमा भित्र्याएको शब्द ‘रक्सिन’लाई भाउजूको मुखबाट सुन्दा हामीलाई आनन्द लागेथ्यो । भीम दाइ हाँसोको मुडमा हुनुहुन्थ्यो कि कसो ? केही भन्न खोज्दाखोज्दै रोकिनुभयो र हार्मोनियम समातेर गुनगुनाउन सुरू गर्नुभयो । गजलमै उहाँको भित्री आग्रह लुकेको थियो र पनि त्यो साँझले छुट्टै पहिचान र अडान कायम गरिछाड्यो ।
मनभरि आज पिउन देउ मनमाया
धेरै दिनको तिर्खा मेट्न देउ मनमाया
कतै भाउजूको मन पग्लिहाल्छ कि भनेर भीम दाइले गजलको स्थाईका हरफलाई तोडेर फेरि दोहोर्‍याउनु भयो । दोहोर्‍याउँदा ‘मनमाया’को ठाउँमा ‘अनुमाया’ गुञ्जियो । तर त्यसले वातावरणलाई हाँसोमय मात्र बनायो सोम-सुराहीको बिर्को खुलाएन । आखिर हामी त्यसरी पनि रमाई नै रह्यौं । मैले सोचेँ- ‘हामी कलाकारलाई रमाउनका निम्ति स-साना कुरा भए पनि पुग्ने रै’छ ।’
सन् २००६ को फ्रेब्रुवरी महिनाको दोस्रो हप्ता थियो । भीम दाइ पलेँटीको निम्ति काठमाण्डौ आइपुग्नु भयो । जावलाखेलको कुनै होटलमा बासको व्यवस्था थियो । करीब दश दिन वाद्यवादकसित बसेर गायकले अभ्यास गर्नु पर्ने समयतालिका मिलाइएको थियो । तर शनिवार भने रिहर्सल हुँदैनथ्यो । सोधेँ- ‘भीम दाइलाई कतै घुम्ने इच्छा छ कि ?’ उहाँले परिचित शैलीमा नाईंको ईशारामा हात हल्लाउनु भयो । तर एकछिन् गमेर झस्कँदै भन्नुभयो- ‘मेरो ईच्छा पुर्‍याइदिने हो भने भन्छु ! एउटा ईच्छा छ !’ मैले उहाँको वाक्य भुईंमा झरी सक्नासाथ भनेँ- ‘भन्नुस् न दाइ ! मैले सक्ने त म गरी हाल्छु नि !’ उहाँ आफ्नो कारणले अरुलाई दु:ख होला भन्नेमा एकदमै सचेत हुनुहुँदो रहेछ । निकैबेर गमेपछि भन्नु भयो- ‘मैले आजसम्म अम्बर गुरुङजीलाई भेटेको छैन ! उहाँजस्तो ज्ञानी मान्छेलाई नभेटी त मर्नु भएन नि भाइ ! तपाईंको समय छ भने, भेट गराइदिनुस् त लौ !’ मलाई भीम दाइको माग सुनेर हाँसो पनि लाग्यो र आश्चर्य पनि । हाँसो यसकारण लाग्यो- ‘भीम दाइको मागको आकार र प्रकारले ।’ आश्चर्य यसकारण लाग्यो- ‘नेपालका यी मूर्धन्यहरूको आजसम्म पनि भेट भएको रहेनछ !’ यस्तो जश लिने विषयमा म किन विलम्ब गर्थें र ? उहाँलाई तुरुन्त तयार हुन भनेँ । ‘दाइ तपाईं तयार हुनुस् ! म आजको लञ्चमा तपाईंलाई कुनै नयाँ परिकार पनि खुआउँछु र साँझ अम्बर गुरुङसित भेट पनि गराउँछु ।’
उहाँलाई लिएर मंगल बजारको पुरानो सत्तलमा रहेको रेष्टुरेण्टमा पुगेँ । मेनु अगाडि राख्दै भनेँ- ‘के लिने दाइ ?’ हातको घडी हेर्दै भन्नु भयो- ‘मध्यान्न छ भाइ ! यति उज्यालोमा के लिने कुरा गरेको ?’ उहाँको हाँसोसित मैले पनि हाँसो मिलाएँ । हाम्रो हाँसो निकै चर्केछ कि कसो ? अरू टेवलतिरका सबै आँखा हामीतिर कर्किए । छेउको टेवलमा बसेका दुई युवतीतिर पुगेर मेरा आँखा अल्झेछन् कि कसो ? दाइले व्यंग्य कस्नु भयो- ‘तन से अकेले का मन कुछ न कुछ ढुडता रहेता है भाइ ! अब एक्लै बस्नु भएन ! हामी देख्नेलाई पनि वैराग चलिसक्यो ।’ आफ्नो प्रसंग ओझेल पार्न मैले कुरा खानातिरै मोडे र उहाँको सामु फेरि मेनु तेर्स्याएँ । भन्नु भयो- ‘यो पढेर म के बुझूँ र गुरुजी ? मगाउनु होस् न ! तपाईंको विचारले !’
मैले पनि जोकिँदै भनेँ ‘तपाईंलाई जल्दोबल्दो खुराक खुवाउँछु दाइ आज !’ मैले मेनुमा लेखिएको सिजलरतिर औंला तेर्स्याएँ र वेटरसित भनेँ- ‘हामीलाई दुई प्लेट आगो मिसिएको खुराक खुआउँ भाइ !’ एकछिनपछि तावाको झ्वाईंसित आगोको ज्वाला बोकेका परिकार हाम्रो सामु आइपुगे । भीम दाइको अनुहारमा साँच्चैको आश्चर्य देखियो । उहाँले साँच्चै आजसम्म सिजलर चाख्नु भएको रहेनछ । रेस्टुरेष्टको भर्‍याङबाट झर्दै गर्दा हाँस्य भावमा भन्नु भयो- ‘आभास भाइ ! तपाईंले जिउँदो विरागलाई आज आगो खुवाउनु भयो र आजको आगो साँच्चै स्वादिलो पनि थियो । तर अब अम्बरजीकोमा जाँदै छौं । त्यहाँ आगोलाई निभाउने पानीको व्यवस्था त हुन्छ होला नि ?’ मैले आफ्नो ढाडमा रहेको झोलातर्फ ईशारा गरेँ र भनेँ- ‘तपाईंको सेवामा भाइ हाजिर छ ।’ हामी ट्याक्सी लिएर चण्डोलतर्फ हुँईकियौं ।
अम्बर गुरुङ र भीम विरागको सम्भावित पहिलो भेटको कुराले म पनि ‘एक्साइटेड’ थिएँ । घरको ढोका ढकढकाउँदै वैठकमा पुग्यौं । परिचय त के नै गराउनु थियो र दुबै हस्ती एकआर्काका सिर्जनाबाट परिचित हुनुहुन्थ्यो । र पनि मैले औपचारिकता निर्वाह गर्न भूलिँन । अम्बर गुरुङले भन्नु भयो- ‘मैले तपाईंको नाम र गाना नारायण गोपालजीबाट धेरै पटक सुनेको हुँ । भेट्ने मात्र मौका नपरेको !’ भीम दाइमा अलिकति संकोच भए झैँ देखिन्थ्यो । त्यसलाई सहज पार्ने उद्देश्यले मैले भीम दाइ पलेँटीमा आफ्ना रचना सुनाउन आउनु भएको र हामीले यस पहिले कहिल्यै नसुनेका रचना पनि सुनाउनु हुने सन्दर्भ जोडेँ । वातावरणमा एकछिन मौनता छायो । भीम दाइले अम्बर गुरुङतिर फर्कंदै भन्नु भयो- ‘अम्बर सर ! म त तपाईंको फ्यान हुँ !’ अम्बर गुरुङले ‘सर’ शब्दलाई शंकेत गर्दै- ‘हामी समकालिन साथी हौं र सायद तपाईं मभन्दा उमेरले पाको नै हुनु होला ?’ भन्ने जिज्ञाशा राख्नु भयो । कुराकानी विस्तार सहजतातर्फ र घाम पश्चिमतर्फ मोडियो ।
आफ्नो छेउको हार्मोनियम भीम विरागतर्फ धकेल्दै अम्बर गुरुङले आग्रह गर्नुभयो- ‘हजूर, हाम्रो पहिलो भेटलाई सम्झना योग्य त बनाउनु पर्‍यो नि ! मैले त आजसम्म तपाईंलाई सुन्नै पाएको छैन !’ भीम दाइले मतिर आँखा डुलाउनु भयो । मैले पनि थपेँ- ‘हो त ! यो साँझ त भीम दाइलाई सुन्नकै लागि त हो ।’ भीम दाइ एकछिन मौन रहनु भयो र सुस्तरी भन्नु भयो- ‘एकछिन मुड बन्न दिऊँ न त !’ कोठामा मौनता फैलियो । तर त्यो मौनतालाई भीम दाइले लामो समय कायम हुन दिनु भएन । हार्मोनियममाका पर्दामा औंला नचाउदै गुनगुनाउनु भयो-
आजभोलि हरेक साँझ मात्तिन थालेछ
त्यस साँझ उहाँको गायन शैलीले अम्बर गुरुङलाई अचम्मको प्रभावमा पार्‍यो । हरेक हरफ र शब्दको उतारचढावमा भीम विरागको जुन पकड देखिन्थ्यो त्यसले हामी गुरु-शिष्य छक्क थियौं । उहाँले शब्द उच्चारणसित भावको नियन्त्रण गरेको सुनेर हामी दुईका आँखाले पटकपटक बात मारी रहे । भीम दाइ क्रमश: खुल्दै जानु भयो । लाग्थ्यो उहाँमा सरस्वति जागेको थियो । उत्साहित हुँदै एकपछि अर्को रचना प्रस्तुत गर्दै साँझलाई रोमाञ्चक बनाउनु भयो भीम दाइले-
कसरी म भुलेँ केमा म भुलेँ
तिम्रो ओंठमा, तिम्रो मुस्कानमा
आँखामा कि भाखामा केमा म भुलेँ
त्यस साँझ हामी घण्टौ भुल्यौँ र पनि हामीलाई लाग्यो हामीले क्षणभर पनि बिताएनौं । लाग्यो, आनन्दपूर्वक भोगेको समय कति छिटो बित्छ पत्तै नपाइने रहेछ । त्यसपछि पनि भीम विराग र अम्बर गुरुङसित कुनै साँझ किर्तिपुरमा त कुनै साँझ हेटौंडामा बिते । ती सबै सुरमयी साँझ पहिलो साँझजस्तै एक झमकमै बिते । अहिले ठान्छु, साँझ भनेकै जीवनचक्र त रहेछ । पत्तै नपाई सुटुक्कै बित्ने ।
अस्ति केही दिन पहिले त हो ! आभाले फोन गरेकी- ‘बुवालाई आइसीयूमा भर्ना गरेको छ’ भन्दै । पहिला पहिला खबर पाउनासाथ तत्कालै पुगिन्थ्यो । यसपाली बेफ्वाँकको व्यस्तताले भोलिपल्ट आउँछु भनेँ । फेरि खबर लिँदा- ‘सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ, केही दिनमै डिस्चार्ज होला ! समय मिलाएर नहतारिई आए हुन्छ ।’ भन्ने भयो र हतारिएन । पन्ध्र गते सोमबार बिहान आठबजेतिर राजकुमारसित सल्लाह भयो र दिउँसो दुई बजेलाई आफ्नो अनुकुलको समय ठानेर त्यही अनुरुप मिलाइयो । फेरि आधाघण्टापछिको अर्को खबरले हामी हतारमै अस्पताल पुग्नुपर्ने भयो । हामी हतारिँदै अस्पताल पुग्यौं । हामी पुग्दा भीम दाइ सधैँका लागि मौन बनिसक्नु भएको थियो । छोरी आभाका आँखाबाट बलिद्रधारा बगी रहेथे । मेरो मस्तिष्कमा भने उहाँसित बिताएका अनगिन्ति क्षणहरू लस्कर लागी रहेथे । जसमा रेकर्ड गर्न बाँकी अनेकौं रचनाका केही हरफ पनि उभिएका थिए । मौन । शान्त । केवल पङ्तिवद्ध !
फूललाई मेरो सलाम काँडालाई पनि सलाम
जीवनका हरेक पललाई झुकी झुकी सलाम
आफ्नो धरातललाई सँधै झुकेर निहार्ने त्यो मान्छेको शीर आज झुकेको थिएन । झुकेका थिए त हाम्रा शीर । लाश सामु झुकेर मैले भीम दाइकै सिकोमा उनकै रचनासित मिल्ने पाराको शैली अपनाएँ र आफूले मात्र सुन्नेगरि गुनगुनाएँ- ‘अनुरागी विरागलाई सलाम !’
View Comments	केही यस्ता आकस्मिकता
Posted by Aavaas In memoirs
‘ब्रम्हाण्डका कुनै कुरा पनि आकस्मिक हुँदैनन्, बरु सबै बस्तु आफ्नो अस्तित्वका लागि अभ्यस्त हुन्छन् र दिव्य-प्रकृतिको आवस्यकता अनुसार विशेष प्रकारले संचालित भएका हुन्छन् ।’ डच यहुदी दार्शनिक बारुच स्पिनोजाले सोह्रौं शताब्दीको मध्यतिर नै यसो भनेका रहेछन् । उनको त्यो भनाइ अहिले मात्र नजरमा पर्‍यो । अन्यथा यस लेखोटको शीर्षक भिन्दै पो हुन्थ्यो कि ? तर त्यस्तो भएन । बारुचको दार्शिनिक हरफमा नजर नपर्दै जुरेको शीर्षकमै अडिने सोच लिएँ मैले ।
मेरा आकस्मिकता यसकारणले आकस्मिक हुन् भन्ठान्छु- कि तिनले जीवनमै अचम्मका छाप छोडेर गए। त्यो पनि एकदम अचानक । सोच्दै नसोचेका बखत । सायद ती आकस्मिकता यसकारणले आकस्मिक नहोलान् पनि भन्ठान्छु- कि दार्शनिक जो बने; महान, अद्भूत र अद्वितीय सोचका अभिव्यक्तिले त बने । तिनका प्रभावशाली कुराको प्रतिपक्षमा लाग्ने हिम्मत र ज्ञान दुबैको अभाव छ ममा । प्रतिवाद गर्न सक्दिनँ । फेरि मैले बुझेका आकस्मिकता नै बारुचले भनेकै- प्रकृतिले संचालन गरेको आवस्यक नियमिता भित्रै पर्ने कुरा हुन् कि ? जे होस् ! जीवनमा केही त्यस्ता घटना त घटे नै; जो छन् उल्लेख गर्न लायक । केही सामान्य । केही त प्रभावशाली र आकस्मिक पनि ।
कुरा स्कूले जीवनको हो । पाँचौं श्रेणीदेखि नै हुनुपर्छ; पैदल हिंडिन्थ्यो दैनिक । स्कूलतर्फ डोरिएका मुख्य तीनवटा गोडेटा थिए । सहपाठीहरूको झुण्डसित ओहोरदोहोर गर्दा दिनको करीब तीनघण्टा पाइला घस्रन्थे ती गोडेटामा । सबैभन्दा उत्तरी गोडेटोले सूर्यमण्डली हुँदै, माझ गोडेटोले सिमपाखो हुँदै र दक्षिणी गोडेटोले ईन्द्राइणी हुँदै हामीलाई स्कूलसम्म ओहोरदोहोर गराउँथे । तिनै गोडेटा र समयसित जोडिएका छन् अनेकौं सम्झना र शृंखलावद्ध आकस्मिकता ।
पहिलो- गिरीजा सर (नेवारीभाषाका महाकवि- गिरिजाप्रसाद जोशी), छन्द र रूमानी पन: गिरिजा सरसित गोविन्द र मेरो बढ्तै निकटता थियो । गोविन्द केही पृथक् खालका कृयाकलापमा रमाउँथ्यो । मलाई उसको त्यही पृथकता मनपर्थ्यो । म उसितै बढी हिंड्थेँ । महाकवि लक्ष्मीप्रसादबाट अत्यधिक प्रभावित थियो उ । काव्यका साथसाथ धुमपानमा पनि देवकोटापन्थी । छन्दमा कविता लेख्नमा अत्यधिक उत्साही । मलाई लाग्थ्यो- उ कुनैदिन हाम्रो जमानाको महाकवि नै बन्ने छ ।
एकदिनको कुरा हो; हाम्रा पाइला नियमित हिंड्ने गोडेटो छोडेर वज्रयोगिनी मन्दीरतर्फ मोडिएथे । मन्दीर नजिकै थियो गिरिजा सरको निवास । घरको मटानमा बसेका गिरिजा सरले त्यसदिन हामीलाई शार्दूलविक्रिडित छन्दको सूत्र लयवद्ध- (नानाना ननना ननान ननना नानान नानान ना) गाएर सिकाउनु भएथ्यो । त्यो छन्द-सूत्रको गुदी, मभन्दा छिट्टै गोविन्दले बुझेथ्यो । त्यसैले होला उसको मुखाकृतिभरि मथिङ्गलको ज्ञानमयी ढोका अकस्मात खुले झैँ भाव दर्शिएथ्यो । गिरिजा सरले पनि त्यही अनुमान लगाएरै हुनुपर्छ तत्काल भन्नुभएथ्यो- ‘गोविन्द राम्रो कवि बन्नेछ ।’ गिरिजा सर हुनुहुन्थ्यो बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी । कवि, उपन्यासकार, नाटककार र अझ धेरै । मेरो त आदर्श पुरुष । उहाँका वाक्य मेरानिम्ति दिव्यवचन । तर म छन्दमा बाँधिन भने मन नपराउने खाले । सायद ममा उतिबेलैदेखि थियो एकखाले मौन अराजकता । (अहिले पो यसो भनेको ! आफ्नो कमजोरी लुकाउने योभन्दा राम्रो उपाय के हुनसक्छ र ? खासमा म छन्दमा थिएँ केही कमजोर । बेछन्दे ।) सत्य हो ! पुराना सूत्रलाई नमानेर विद्रोह गर्ने स्वभाव ममा यद्यपि छ । केही कुरामा ढीठ र हठीपन पनि कायम नै छ । तर तिनलाई प्रष्टगरि बाहिर देखाउने स्वभावको अभावसमेत पनि अहिलेसम्मै उस्तै छ । भनौं- त्यो बेछन्देपन कतै न कतै कायम नै छ । त्यस्तै के कताको प्रभाव या अभावले हो; उतिबेला गिरिजा सरले- ‘गोविन्द राम्रो कवि बन्नेछ ।’ भनेबाट इर्ष्या जागेछ कि कसो ? लुकीछिलपी कविता लेख्न खोज्ने मैले त्यस दिनपश्चात कहिल्यै पनि छन्दमा लेख्ने प्रयास गरिनँ । केही अन्तराल बित्यो । गिरिजा सरसितको निकटता भने निरन्तर नै थियो । एकदिन कक्षाकोठामा पढाइरहेका सर अकस्मात गाउन थाल्नुभयो-
अपने रूख पर निगाह करने दो
खूबसुरत गुनाह करने दो
मैले बेलाबखत गिरिजा सरका रोमान्सका कथा नसुनेको होइन । तर त्यसदिन देखिएको उहाँको रुमानी व्यक्तित्व झन् अद्भूत र आकर्षक थियो । गिरिजा सरको कपाल काँधसम्म पुगेर घुमुर्किएको । जो थियो:- मैले फोटोमा देख्ने गरेको सेक्सपियरको स्वरुपभन्दा पनि आकर्षक । अझ गीतको आरोह अबरोहसँगै तल माथि बयली खेलेका उहाँका हात र मुद्रामयी उहाँका औंलासँगै देखिने हाउभाउ । चित्ताकर्षक । मानौं हाम्रा सर कुनै सिनेमाका कुशल अभिनेता । फेरि स्वरमा रहेको आकर्षण पनि रफिकै हाराहारीको । मधुर, लयात्मक, गुलाबी । भाव पनि तन्मयी र रूमानी । अनि गीतको हरफसँगै देखिने र छोपिने टम्म मिलेका दाँत । साथै मनको प्रफुल्ल भाव झुल्किने क्षितिज झैँ देखिएका उहाँका उज्याला अधर । र तिनले उच्चारण गरिरहेका गीतका हरफ-
रुख से जरा नकाब उठा दो, मेरे हुजूर
त्यही गीत सुन्दैगर्दा मेरो अन्तरमन अकस्मात तरङ्गित भएथ्यो र भनेथ्यो- ‘तेरो मूल विषय यही हो है- संगीत मात्र संगीत !’ म ठान्छु; त्यसै क्षणदेखि मेरो अन्तरमनले संगीततर्फको अनन्तयात्रा तय गरेको हो। साँच्चै भन्छु- त्यही दिनको प्रभावले एकदिन अकस्मात मैले नाडीको घडी बेचेँ र बेन्जो-बाजा किनेँ । त्यही बेन्जोको रीडमा मेरा देब्रे हातका औंला सलबलाए र मैले जीवनमै पहिलो धुन बजाएँ-
ना जाने किस पे आएगा
अहिले सोच्छु- त्यस दिन गिरिजा सरले गीत नगाएर ब्ल्याकबोर्ड छेउमा क्यानभास उभ्याउँदै कूची चलाएको भए ? के थाहा ? मेरो मन संगीततर्फ नमोडिएर अकस्मात क्यानभास र रङ्तर्फ पो मोडिने थियो कि ?
दोस्रो- धुवाँबाट निर्मित गोलाकार रिङ् र तिनलाई बुन्दै हिंड्ने ओठाकृति: लुकीछिपी हिन्दी फिल्म त हेरिन्थ्यो नै । अभिनेताले रवाफिलो पाराले सल्काएको चुरोटको प्रभाव औंलासम्म आउन भने बाँकी नै थियो । बरु शिक्षकले ब्ल्याकबोर्ड मुनी छोड्ने गरेका सेता चकका टुक्रा औंलाबीच चेपिने क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको थियो । केही मित्रहरू त ५५५ कै चुम्बनमा फसिसकेका थिए । उनीहरू कहिले अमिताभ त कहिले रजनीकान्त पाराले चुरोट च्याप्दै गोडेटो काट्थे । एकदिन, दुईदिन, अनेकदिन । म भने त्यो दृश्य हेर्न मात्र अभ्यस्त । उनीहरू आफ्ना ओठ पानीबिनाको माछाको थुतुनोजस्तै बनाउँथे । धुवाँले बनेको गोलाकार आकृति हावामा बाङ्गिदै उड्थ्यो र छरिन्थ्यो । हावामा उड्दै गरेको धुवाँको गोलो, दिउँसो मैदानमा खेलेको रवरको रिङजस्तै देखिन्थ्यो । म दृश्य हेर्दै हाँस्थेँ । त्यो देख्दा लाग्थ्यो- ‘उनीहरूको कृयाकलाप फिल्मी र आधुनिक ! यो त सिक्नै पर्छ कि कसो ?’ फेरि अर्कोदिन लाग्थ्यो- ‘चुरोट त छुनै हुन्न । स्वास्थ्य पढाउने मिसले भनेको कुरा ठीक- ‘धुवाँले फोक्सोमा दाग बस्छ ।’ हरेकदिन मनमा आन्तरिक द्वन्द चल्ने क्रम रोकिएको थिएन । एकदिन अकस्मात मन उत्ताउलियो । सँगै हिंड्दैगरेको सहपाठीको हातमा भरखर सल्किएको ५५५ थियो । मैले हठात् खोस्दै एकसासमा दह्रो सर्को तानेँ । धुवाँ मुखमै थियो । त्यसले स्वासनलीतर्फ प्रवेश पाएकै थिएन । मित्रले त ममाथि अनौठा शब्दहरू पो वर्षाउन थाले- ‘मा…साले ! त्यत्रो रहर छ भने किनेर खानु थियो नि ! अर्काको मजालाई हरण गर्ने ?’ उसका वाक्यले मेरो फिल्मी र आधुनिक बन्ने उमंगको पारो खर्ल्याप्-खुर्लुप् ओह्रालो झर्‍यो । अनुहार ग्लानिले लल्याक्-लुलुक् भयो तर मस्तिष्कले आकस्मिक निर्णय लिन भने ढिला गरेन । धुवाँ फ्याँकिरहेको चुरोटलाई तत्काल धुजाधुजा पार्दै मैले भनेँ- ‘यी लाऽऽ तँ मा…सालेलाई पनि ! यो चुरोटको स्वाद तेरोनिम्ति अन्तिम भो ! म आजबाट जीवनभर नै चुरोट खाने छैन !’ त्यो दिन उसले तत्काल अर्को चुरोट सल्कायो सल्काएन ? हेक्का रहेन । मैले भने पच्चिसौं वर्षपछि मात्र आफ्नो पुरानो वाचा क्षणिक समयका लागि परित्याग गरेँ । त्यो पनि पुराना अमेरिकन ज्याज‍-स्टार न्याट किङ कोलको भनाइबाट प्रभावित भएर । उनलाई डाक्टरले चुरोट छोड्ने सल्लाह दिँदा भनेका रहेछन्- ‘चुरोट र गायन दुबै छोड्दिन; चुरोटको प्रभावले बनेको ओजिलो स्वरलाई नै मेरा फ्यानहरूले रुचाएका हुन् । म आफ्ना फ्यानले मन पराएको स्वर गुमाएर उनीहरूको चित्त दुखाउन चाहन्न ।’ न्याटको कुटनैतिक भनाइभित्रबाट ‘चुरोटले स्वरलाई राम्रो पो बनाउने रहेछ !’ भन्ने भाव निकालेछु मैले । करीब तीनवर्षसम्म धुवाँको संगत गरेपछि एकदिन पलेँटीमा गाउँदै गर्दा मस्तिष्कले अकस्मात सोच्यो- ‘आभास ! धुवाँ तेरोनिम्ति होइन ।’
अहिले सोच्छु- ५५५ खातिर उहिल्यै ती मित्रले मलाई नसरापेको भए ? अनि त्यसदिनको पलेँटीमा गाएर उठेपछि मेरा अमूक फ्यानले अकस्मात ‘धुवाँले त तिम्रो स्वर नौलो र वजनदार भएछ ।’ भनेको भए ? के जान्नूँ ? म पनि कोलले झैँ कुटनैतिक पाराले फ्यान र चुरोट दुबैलाई एकसाथ ‘धन्यवाद !’ भन्दै गरेको पो हुने थिएँ कि ?
तेस्रो- उधारो दाम, चोर बाटा र पसले-बा: मूल गोडेटासित जोडिएका चोरबाटाले हामीलाई अनेक संकटबाट उम्काउथे । त्यसैले अभरपर्दा, हामी वैकल्पिक चोरबाटा प्रयोग गर्नमा उत्साही बन्थ्यौं । खासगरि समयमा उधारो तिर्न नसकेर तर्सँदा चोरबाटा नै हाम्रा उद्दारकर्ता बन्थे ।
खजुरी-बिस्कुट, मिश्री, पुष्टकारी, चना, भट्मास, बदाम । खाजाका अनेक रुप । अधिकांशका खल्ती भने प्राय शून्य । तर उधारो चल्थ्यो । सानागाउँको पोखरीकै डिलमा थियो चतुरेबाको पसल । चतुरेबाको खाता बाक्लो गाता भएको मयूरछाप कापीमा हुने गर्थ्यो । त्यस कापीको कुनै पानामा मेरो नाम पनि उल्लेख थियो । उधारो लिन जो हिचकिचाउथ्यो, सहपाठीका नजरमा लोभीमा दरिन्थ्यो । मैले आफ्नो नामको अगाडि ‘लोभी’ विशेषण थपिनु पहिल्यै खाता खोलेको थिएँ । सायद कसैको सिफारिसमा । नयाँ उधारोकर्ताले खाता खोल्नु परे चतुरेबाको नजरमा इमान्दार ठहरिएका कसैले साक्षी बसिदिनु पर्थ्यो । खातामा नाम लेख्दैगर्दा आफ्नो रकम नफसोस् भन्नेमा पूर्ण सजग हुन्थे चतुरेबा । भन्थे- ‘ट्याममा टिरेन भने, म टिम्रो बालाई भन्न आउँछ नि ! बुझ्यो टिम्ले ?’ उसबेलाका अविभावकहरू अहिलेजस्तो ‘टिफिन कल्चर’मा अभ्यस्त थिएनन् । त्यसैले घरको ताजा मकै-भटमास छोडेर उधारोमा मिस्टान्न खाने छुट दिने त कुरै भएन । र पनि किशोर-जिभ्रोले कहाँ मान्नु ? बरु बेलाबखत लामोहात गर्ने अवस्था आउँथ्यो होला । तर उधारो भने खाइन्थ्यो नै । मलाई हेक्कै भएन; मेरो खातामा पनि ३ रुपियाँ ३२ पैसा चढिसकेछ । अरुका खाता पनि खाली त कहाँ थिए र ? खाता बाक्लिएपछि चतुरेबाको पसल छल्दै चोरबाटो ताक्नु बाहेक अर्को विकल्प हुन्नथ्यो । सामुहिक सल्लाह गरे झैँ हाम्रो सम्पूर्ण झुण्डले चोरबाटो समात्थ्यो। त्यो नै दीर्घकालिन उपाय भने हुन्नथ्यो । दीर्घकालिन उपाय त घरको मूल सन्दूक अथवा बाको खल्तीमा लुकेको हुन्थ्यो ।
त्यसरी भागेर त कति दिन चल्थ्यो र ? सुवेदी गाउँको दोबाटो हुँदै सिमपाखातिर झर्दैगर्दा सोचेँ- ‘सन्दूकको चाबी र बाको खल्तीमा कुन सजिलो होला ? तर थाहापाएपछि प्राप्तहुने प्रतिकृया र विशेषण ?’ उफ्ऽऽऽ ! मैले लामो सास फेर्दा मेरा सहयात्री गणेशेको पसलमा बनेका ताजा पुष्टकारी चपाउँदै थिए । म एक्लै सिमपाखातर्फ लागेँ । ओरालोको मुखमा नपुग्दै मेरा आँखा भुईमा टल्केका तेजिला बस्तुमा अकस्मात अडिए । एक रुपियाँ, दुई रुपियाँ, तीन रुपियाँ । दुई-तीन पाइलाको अन्तरालमा छरिएका सिक्का बटुल्दै म चकित परेँ । फेरि उस्तैगरि ओह्रालो सकिनासाथको दोबाटोमा गाईको चित्र अंकित पहेंलो दशपैसा । एउटा, दुईटा र अर्को पनि । सँगै डाँफेको चित्र अंकित दुईपैसा । मान्छेको लोभ अनौठो हुन्छ । मेरा आँखा कसरी भुईंतिरै रुमल्लिएका ? त्यो दिन मात्र होइन । लामो समयसम्म । कतै फेरि भेटिन्छ कि ? तर त्यो नै थियो अद्वितीय आकस्मिकता । उधारो ३ रुपियाँ ३२ पैसा । हात परेको पनि ३ रुपियाँ ३२ पैसा नै । अनौठो उदेक् । तर कसरी ? उहिलेदेखि रहेको छु अनुत्तरित ।
अहिले सोच्छु- त्यसदिन दोबाटोमा त्यो आकस्मिकता नघटेको भए ? के थाहा ? हजूरआमाको सन्दूक अथवा बाको खल्तीमा पल्केको हात र आदतको मजबुरीले आजको मेरो संगीत पनि मेरै सिर्जनाको भरमा टिकेको हुन्थ्यो या अरु कसैको सिर्जना ताक्दै ?
चौथो- रञ्जना हल, ‘आदमी सडक का’ र सिक्काको नाच: एकदिन स्कूलबाट भागेर शहर पसियो । साथमा थियो उही गोविन्द । सिनेमाको रस जो बसेको थियो । पर्दामा जीवन्त मानव चित्रहरू सलबलाएका देख्दा अचम्म लाग्थ्यो । हिन्दी भाषाको पढाइ र ज्ञान त थिएन । र पनि कथा स्पष्ट बुझिन्थ्यो । बुझिन्थ्यो मात्र होइन ! फिल्म हेरेर फर्केपछि सहपाठीहरू बीच पलेँटी कस्दै हुबहु कथा वर्णन गरिन्थ्यो । उबेला उपत्यकामा रहेका हलहरू विश्वज्योति, जयनेपाल, अशोक, नवदुर्गा सबै चाहरी सकेको थिएँ मैले । कहिले नाताका काकाले त कहिले साख्खे मामाले परिचय गराएथे पर्दाको त्यो रमणीय संसारसित ।
रञ्जनामा भने पहिलोपल्ट प्रवेश भएथ्यो । फिल्मको पोस्टर हेर्दा संगीतकारको नाम पनि नछुटाइ हेर्थें म। नौशाद, एस. डी. वर्मन, सलिल चौधरी, आर. डी. वर्मन, मदनमोहन मनपर्दा नाम हुन्थे । त्यसदिन त परैबाट पोस्टरमा देखिएका शत्रुघ्न सिन्हाको चित्र मात्र हेर्ने फुर्सद भयो । मुस्लिम चरित्रका शत्रुघ्नको चित्र मुन्तिर लेखिएको थियो- ‘आदमी सडक का’ । हतारिँदै ब्ल्याकमा टिकेट किन्यौं ।
हल भित्र छिर्दा टिकेट चेक गर्नेले आँखैमा पर्नेगरि टर्चको उज्यालो हामीतिर नचायो र बस्ने इशारा गर्‍यो । सुस्तरी पाइला चाल्दै सीटमा बस्यौं । पर्दामा यशुदासले अभिनय गरेको भिक्स-चक्कीको विज्ञापन चल्दै थियो । त्यसलगत्तै फिल्म सुरु भयो । हाम्रा तनमन पर्दातिरै केन्द्रीत भए । कथाले बिस्तारै उत्कर्ष लिँदैगर्दा पर्दामा ठूलो अक्षरको ‘मध्यान्तर’ झुल्कियो । बाहिर निक्लेर चना चपाउँदै गर्दा गोविन्दले मतिर हेर्दै भन्यो- ‘ओइ, घर फिर्ने गाडी भाडा त नपुग्ने रै’छ ।’ जोसैजोसले खर्चँदा हिसाबकिताब भएछ गोलमाल । दुईजनालाई चाहिने भाडामा एक रुपियाँ कम भइसकेछ । खर्चको जिम्मा लिएको गोविन्दले घोरिँदै उपाय निकाल्यो- ‘हाफ-टाइम’पछिको कथा अलिकति मात्र हेरौं र हिंडेर घर जाऊँ !’ हिंड्ने कुराले मलाई रिङटा छुट्ला झैँ भयो । त्यो पनि एकनासले हिंड्दासमेत तीनघण्टा लाग्ने लामो बाटो । अब गर्ने के? नपुग भाडामै गाडीमा फिर्ने आँट गरौं कि ? गाडीवालाले कम भाडा दिनेको कठालो समात्दै वेइज्जत गरेका दृश्यका भुक्तभोगी हामी । आखिर गोविन्दको उपाय निर्विकल्प भयो । हामी फेरि हलमा छिर्‍यौं । टिकेट जाँच्नेले उसैगरि टर्च बाल्यो । हामी उसैगरि सीटमा पुग्यौं । फिल्मले नयाँ मोड लिँदै थियो । मेरो कानमा अकस्मात एउटा छुनमुने आवाज ठोक्कियो- किरिरिरिरि छुनुनुन्न छ्याप् !!! आवाजको पिछा गर्दै कसैले नेवारीमा भन्यो- ‘काऽऽऽ कुटु वन:’ । छामछामछुमछुम गर्दै उ मेरो दाहिनेपटीको खाली भागसम्म आइपुग्यो । पछाडीबाट एकसाथ केही आवाज ओइरिए- ‘ऐऽऽ फेटु, फेटु ! सुङ्क च्वँ ! डिस्टब यामते !’ उ चुपचाप निहुरँदै फर्कियो र आफ्नो सीटमा बस्यो । पर्दाको दृश्यमा उज्योलो बढ्दा खुट्टा छेउमा मैले केही टल्केको देखेँ । त्यो टल्कँने बस्तुलाई सुस्तरी जुत्ताले छोपेँ । त्यतिबेला पर्दामा साइकिल चलाउदै गीत गाइरहेका थिए शत्रुघ्न सिन्हा । शत्रुघ्नतिर हेर्दै मैले आफ्नो हात आफ्नै खुट्टातिर बढाएँ र जुत्ताले थिचेको टल्कँने बस्तु हत्केलामा ल्याएँ । देखेर चकित परेँ- ‘एक रुपियाँ’ । तुरुन्त गोविन्दलाई कोट्याएँ- ‘ओइ, मैले एक रुपियाँ भेटेँ !’ उस्ले दह्रोगरि मसित हात मिलायो । हामीले उन्मुक्त बन्दै पूरै फिल्म हेर्‍यौं। मलाई अझै सम्झना छ; महाबौद्धको गल्लीबाट बस-पार्कतर्फ लाग्दा हाम्रा ओठ उमंगले चलायमान थिए-
कोइ काम नहीं है मुस्किल
जब किया इरादा पक्का
मैं हुँ आदमी सडक का
अहिले सोच्छु- त्यसदिन नाच्दै गरेको सिक्का मेरै सामुमा नरुक्दो हो त ? के थाहा ? मैले आकस्मिकताहरू माथि यसरी सोच्ने नै पो थिइन कि ?
View Comments	‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगले बहकिँदा
सलिल भाइ !
‘एन्जाइटी’ शब्दलाई मैले उद्वेग भन्ने निधो गरेँ । ठ्याक्कै त्यही अर्थ त नबोक्ला तर भाव आउला भन्ठान्छु । केही अघि भाइले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा यसका सम्बन्धमा संक्षिप्त बोल्ने मौका परेथ्यो । सम्झना छ नि ? सिड्नी कलेजकी प्रोफेसर डायना केन्नीले ‘म्युजिक पर्फोरमेन्स एन्जाइटी’बारे निकै गहन अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । पाश्चात्य संगीतको प्रस्तुतिलाई आधार मानेर गरेको उनको अनुसन्धानका मानवीय पक्ष हामीलाई पनि कामलाग्दा थिए । त्यही दिन प्रोफेसर अभि सुवेदीले हाम्रा केही संगीतकारका ‘एन्जाइटी’का बारेमा राखेका अभिव्यक्ति पनि कम रोचक थिएनन् । मौका परे त्यस्ता विद्वत भेलामा फेरि जमघट होला । आज भने निजात्मक पाराले आफ्नै चेतको कुनामा गुम्सिएका ‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगका बारेमा छरपस्टिन चाहन्छु म । लेख्दै जाँदा कति कुरा आफू या संगीतसित जोडिएर आउलान् कति साहित्य या समाजसित । यसै भन्न सक्दिन । हेरूँ ! सोचाइले कताकता कावा खेलाउँछ । मन जे जता बहकिए पनि कुनै बात नलागोस् भनेर ‘छरपस्टिन’ चाहन्छु भनेँ है मैले ।
उद्वेग, यस्तो छटपटी हो जसलाई सरल चित्रमा उतार्न खोजे पनि अमूर्त चित्र बन्छ झैँ लाग्छ । हुन त चित्र जति नै अमूर्त भए पनि तिनमा पोतिएका रङ्गले आ-आफ्नो अस्तित्व बोकिरहन सक्छन् । एक्कैठाउँ रहेर पनि भिन्दाभिन्दै देखिन्छन् ती । तर उद्वेगको रङ्ग त साह्रै अस्पस्ट हुन्छ कि भन्ठान्छु । खज्याङ-मज्याङ । धुमिल र कठीन । स्पर्शित तर अदृश्य र अस्थिर पनि । यस्तो अस्थिर र अदृश्य भावका विषयमा व्यक्तिनु त्यति सहज त पक्कै छैन । र पनि माथि नै भनी भ्याएछु । निजात्मकताको सहारामा केही भन्न सकौंला कि सोचेर ।
सम्झन खोज्दैछु सलिल ! साँच्चै म पहिलोपल्ट कहिले उद्वेग याने ‘एन्जाइटी’को शिकार भएँ हुँला हँ ? (‘शिकार’ मैले यसकारण भनेँ- ‘एन्जाइटी’ले कलाकारलाई सखाप पनि बनाउन सक्छ रे ! तर मलाई त्यसले घाइतेसम्म मात्र बनाएछ । र त केही भन्नसक्ने हविगतमा रहेको छु ।) त्यो बेला सायद पन्ध्र-सोह्रको थिएँ हुँला । गोपालप्रसाद रिमालको ‘आमाको सपना’ हातमा थियो । माटेघरको कोठाको बिछ्यौनामा पल्टेर पढ्दै-
आमा त्यो आउँछ र ?
त्यसको कम्मरमा झुण्डिएको शीतजस्तै टल्कने
तिमी एक हतियार देख्ने छौ;
त्यसैले ऊ अधर्मसित लड्नेछ ! ………”
पूरै कविता पढे लगत्तै मेरो मनमा अनौठो व्याकुलता पैदा भएथ्यो र अनायास फुस्केथ्यो गहिरो उछ्बास । अहिले सोच्छु- त्यो नै मेरो पहिलो सिर्जनात्मक ‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगको अमूर्त आवाज रहेछ । कविता फुर्नु पूर्वार्धको मेरो सुस्केरा । (भनौं न- ‘एन्जाइटी’-प्रस्फुटन ! ) जसलाई आमाले पल्लो कोठाबाटै सुन्नुभएछ । सोध्नुभयो- ‘के भो कान्छा ? केको सुस्केरा ?’ आमाको प्रश्नको जवाफमा मैले केही भनिदिएँ । टार्ने पाराले । अझ भनौं ढाँट्ने पाराले । र सायद तत्काल लेखेँ एउटा कविता; ‘बाँसुरी वादिका’-
“………म मेरो बाँसुरी फुकेर
मेरो बाँसुरीको स्वरसँगै पीङ् खेलेर
मतिर आइरहेछ ………”
समय त्यस्तै थियो भाइ ! उमेरको हाँगामा किशोरवय उर्लँदो बेला । समाज अहिलेभन्दा धेरै बन्धनमा जकडिएको । उतिबेलै पनि निजी कुरामामात्र अल्झनु भने सम्भव भएनछ । झन् किशोर अवस्था भनेको परिवर्तनको बिउ उम्रने सबैभन्दा मलिलो मनोवैज्ञानिक बियाडजस्तो । ‘म’रुपी बियाडमा पनि सपनाका बिउहरू उम्रिए नै । त्यसैले त हो, देवकोटा, रिमाल, भूपी, माधव, सिद्दीहरू हातमा परेछन् र सोच आएछ- कविता लेखुँ लेखुँ । अम्बर, नारायण, बच्चु, अरूणा, ताराहरू मात्र होइन मञ्जुल, रामेश, अरिम, रायनहरू कानमा परेछन् र सपना मौलाएछ- गीत गाऊँ गाऊँ । अनि एकैसाथ दुबैथोक भएछन् । अन्जानै अन्जानमा । सिद्धान्त जानेर होइन । प्रविधि बुझेर पनि हुँदै होइन । खै केले त्यता डोर्‍यायो ? पटक्कै थाहा छैन । सायद अवचेतन मनमा लोभ रोपिएको थियो कि ? नाम कमाउने ! सबैतिर चिनिऊँ भन्ने ! अहिले सोच्छु- पहिचानको खोजीमा समेत ‘एन्जाइटी’को जरो टुसाउँदै गरेको हुनेरहेछ कि कसो ? नत्र किन भएथ्यो अन्तरमनमा उस्तो छटपटी ? र किन निस्किएथ्यो त्यो उद्वेगी सुस्केरा ? त्यहीताकाको हुनुपर्छ । अर्को सानो घटना पनि सम्झन्छु । कुरा के भने, उबेला नै मैले नाटक पनि खेलेछु । पहिलोखेप मञ्चमा निक्लँदा म बनेथेँ नारीपात्र । (सायद त्यो नै थियो अन्तिमखेप पनि । तर जीवनलाई नै नाटक मान्ने हो भने त; अनेकखेप अनेक रुपमा अभिनय गरियो र गरिँदै छ है !) उतिबेला भने उभिनु थियो कुनै गाउँले नाटकको ‘लभ-सिक्वेन्स’मा । किशोरले प्रेम प्रस्ताव राख्दा देखिने लज्जा झल्काउनु पर्ने दृश्य थियो त्यो । रङ्गमञ्च प्रवेशको ठीक केही मिनेट पहिले; रिङ्गटा लागेर झण्डै ढुन्मुनिएथेँ । अहिले चर्चा भयो र पो ‘एन्जाइटी’सित परिचित भएँ । तिमीमार्फत् विषयगत वक्ता नै पो बनाइएँ त ! बल्ल चाल पाउँदै छु- ‘एन्जाइटी’ पो रहेछ उतिबेला झण्डै ढुन्मुनाउने पनि । हेर त भाइ ! पुरुषले नै नारीरुप धारण गरी अर्धनारी बन्नु पर्ने बेलाको मान्छे पो म त । नयाँ कहाँ हुँ र ? अब भन त ? कसरी विषयगत मात्र बन्दै, निजात्मक भएर व्यक्तिन पाउनु ? र नयाँ केही भन्नु हौ ? लाग्छ- हाम्रो समाजले गर्न नमिल्ने धेरै कुरा गर्ने छुट दिँदै आएको छ । अनेक पात्रमार्फत् । निरन्तर । तर गर्न मिल्ने र गर्न सक्ने कुरामा अल्झो थाप्न भने अझै छोडेको छैन । झन् अहिलेको समाज त, खुट्टा गन्नै नसकिने सर्पको चालजस्तो । अदृश्य र रहस्यमय पाराले चलायमान । भित्रभित्र असंख्य चलखेलमा सलग्न हुँदै फनफनी घुम्न माहीर । हुन्छ नि ! घट्टजस्तो एउटै आवृत्तिमा घुम्न अभ्यस्त । बेफुर्सद् तर जहाँकोत्यहीँ चक्कर-मस्त । यस्तोमा एकाग्र हुँदै नयाँ कुरा खोज्नु मूर्खता सिबाय केही होइन सलिल ! तिमीले मेरो लेखोटको पाराबाटै अनुमान गरिसकेको हुनुपर्छ- वर्तमानले मलाई बहकाएको छ । महसुश गर्‍यौ ? म बारम्बार हुनखोज्दैछु विषयबिमूख । अस्ति हो क्यार । बिहानको योगा सकेर टीभी सामुन्ने पलेँटी कसेको हुन्छु । समाचार अन्तरगतको एउटा सेग्मेन्टमा प्रधानमंत्रीलाई ‘सुपरम्यान’ ठान्ने अभिव्यक्ति दिँदै हुन्छ कोही मनुवा । भन्दै हुन्छ- ‘यिनले त केही गर्छन् जस्तो छ !’ म त्यो मनुवाको मुहारमा समेत ‘एन्जाइटी’ देख्छु । सायद उसलाई पनि मलाई झैँ अभावग्रस्त दैनिकीले सताएको छ । ऊ त्यसबाट उम्कन चाहन्छ । त्यसनिम्ति नै होला । अतिआशावादको लौरो टेक्दैछ ऊ । डुब्दैगरेको आफ्नो वर्तमानले निम्त्याएको ‘एन्जाइटी’ले ग्रस्त छ विचरा । भन्छन् नि- ‘डुब्ने बेलाको त्यान्द्रो सहारा ।‘ हामी हाम्रा त्यान्द्रे प्रधानहरूलाई ‘सुपरम्यान’मा परिणत भएको परिकल्पनाले आनन्दित हुन खोज्दैछौं । उदेक लाग्दो ‘फिक्सन’मय छैन त हाम्रो बेला ? साँच्चै हाम्रो वर्तमान त आशावादको पराकाष्टामा पुगेको छ कि जस्तो । केही वर्षअघि अनायास हराएका मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले हामीलाई ‘फ्याटालिस्ट’ भनेथे । याने भाग्यवादी । हामी भाग्यवादले गर्दा पिछडिएका रे ! हिजआज अखबार पढ्छु, टीभी हेर्छु र अलमलिन्छु । डोरबहादुर बूढाले भनेको समय घर्केर हाम्रो समाजले साँच्चै नयाँ कोल्टे फेर्ने शंकेत देखाएको हो कि ? अथावा उग्रआशावादको बाटो हुँदै भाग्यवादले झन दह्रो जरा गाड्न थालेको हो ? सक्दिन खुट्याउन । कुनै एकजनाले समाजलाई सर्लक्कै उभो लगाउन सक्छ र भन्या ? एकजनामै आस्वस्त हुन त ‘फ्युडलिजम’ले सिकाएको होइन र ? त्यसरी हेरौं त ! हाम्रो समाजले त बोक्रा मात्र फेरेछ । गुदी त पुरानै पो छ त । एउटाको यत्नले मात्र ल्याएको परिवर्तन त कुनै अर्को बिब्ल्याँटोले सजिलै पल्टाइदेला नि ! धेरैको प्रयत्न र मन, मस्तिष्कले भित्र्याएको परिवर्तन पो दीगो होला त ! होइन र ?
छ नि भाइ ! खासमा मैले खोजेको मञ्चमा गीत गाउन बस्दा आइपर्ने ‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगको कुरा गर्न । तर यसरी लगातार कता हो कता शृंखलाहीन हुँदो छु । बनाइँदो छु भनौं न । मेरो यो बिशृंखलतामा पनि तिमीले ‘एन्जाइटी’को छनक पाएनौ ? खासमा आफ्नो विषयभन्दा बाहिर जानकारी राख्नुले पनि ‘एन्जाइटी’ निम्तने र झन् बढ्ने रहेछ । तर के गर्ने ? हाम्रोमा विषयबिमूख नभइ धरै छैन ।
सोच त सलिल ! मलाई छ नि मलाई ! गीत, सरगम, स्वर र बाजा बाहेकका विषयमा चासो नराख्नु पर्ने हुँदो हो त कति सन्च हुन्थ्यो होला ? हार्मोनियम समात्यो । केही बुन्यो । मस्तले गायो । त्यतिमात्र किन ? ‘नेपाल सिम्फोनी’ नै लेख्यो । संविधानको जुनसुकै धारामा जेसुकै बहोस् या जमोस् ! के वास्ता ? मेरो निकटको मित्र कट्टरपन्थी बनोस् या साप्रदायिक ! के चासो ? फलानोको आचरण भ्रष्ट बनोस् या दुराचारी ! के टण्टा ? ढिस्कानोले अख्तियार धाउने अवस्था आओस् या पशुपतिनाथ ! के मतलब ? तर के गर्ने ? मन जो छ; कौतुहलपूर्वक बहकिने । मस्तिष्क जो छ; केही खोजिरहने । चेत जो छ; अलिकति बुझ्नै पर्छ भन्ने । भवना जो छ; केही त सप्रोस् भन्ने । अनि समय जो छ; लागेको कुरा अभिव्यक्त हुनै पर्ने । थोरै थाहा भएपछि केही बोलौं कि भन्ने हुन्छ । बोल्नु परेन ? त्यसैले नबहकी सन्चले रहनै सक्दिन । बुझ है ! मेरो विशेषता नै बहकिनु हो । त्यही बुझ्यौ भने ढुक्क । हाइ-सन्च ।
प्रोफेसर केन्नी र सुवेदीहरू त ‘पर्फोरमेन्स एन्जाइटी’मा कति राम्ररी केन्द्रीत भएथे त्यसदिन । रङ्गमञ्चमा उभिनु पहिले र रङ्गमञ्चबाट उत्रिसकेको लामो अन्तरालसम्म पनि कलाकारको मन कसरी हुन्छ उद्वेग व्याप्त ? याने ‘एन्जाइटी’ ग्रस्त । उद्वेगको कुन हदसम्मलाई मान्ने समान्य ? त्यो कुन अवस्थामा पुगेपछि कलाकार बन्छ असामान्य ? ‘एन्जाइटी’ ग्रस्त अवस्थामा कलाकारको मनले कसरी खोज्छ धुवाँ, रक्सी र ड्रग्स ? कसरी भाग्न खोज्छ ऊ समाजबाट पर ? कहिलेकाँही त आफैँबाट समेत टाढा ? यी सब प्रश्नमा कति राम्ररी अभिव्यक्त भएथे ती प्रोफेसरहरू ।
साँच्चै विद्वानहरू विषयमा मिहिन पाराले पस्छन् । केस्राकेस्रा केलाउछन् उनीहरू । झन् पश्चिमाहरू त तहतह पल्टाउँदै गहिरिन माहीर । त्यस दिन प्रोफेसर केन्नी पनि त निकै गहिरिएको छनक पायौं हामीले । मन पर्‍यो । मेरो अहिलेको यो लेखकीय भूमिका छ नि सलिल ? यो त हिन्दी सिनेमाको नायक जस्तो । सबैतिर अब्बल देखिनु र देखाइनु पर्ने । नक्कले । त्यही भएर ‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगका सम्बन्धमा व्यक्तिन खोज्दा अन्तै रुमलिन पुगेँ । यो हुनु पनि कतै अब्बल देखिन्न कि भन्ने सोचबाट उब्जेको ‘एन्जाइटी’ नै त हो ! मेरो यो अवस्थालाई सुहाउने भूपीका प्रख्यात दुई हरफ छन् । ती अघि लेख्न बस्दादेखि नै मथिङ्गलमा चक्कराइरहेछन्-
कानमा इयरफोन लगानु पर्ने बहिराहरू
धन्यवाद भूपी ! तिम्रा हरफले मेरो चेत खुल्यो । अन्तमा मैले आफ्नो अल्पज्ञानबारे यसरी आँ गरेँ सलिल ! आशा छ; अलंकार पक्कै बुझ्नेछौ । बस् यत्ति । (कान्तिपुर, कोसेलीबाट)
View Comments	new album @ market
'ल्याम्पपोस्ट' प्राप्त गर्न माथिका ठेगाना र नम्बरमा सम्पर्क गरौं View Comments	CRBT code No. of ‘Lamppost’
View Comments	Lamppost
भोलि सार्वजनिक हुँदैछ 'ल्याम्पपोस्ट'
View Comments	New Album
View Comments	HAPPY NEW YEAR-2068
View Comments	एउटा गोठालोको किताब-यात्रा
किसानको घरमा के हुनु पुस्तकालय ? आँगनदेखि बुइगलसम्म अन्नका दाना, धुस्नो, पराल र दाउरा पो हुन्थे । तै पनि कसरी हात पर्‍यो कुन्नी फ्राँन्सेली लेखक भोल्टेयरको ‘कैण्डिड’ ? थाहा छैन । सायद सूर्यदाइको घरबाट ल्याएँ कि ?! स्कुले किताबबाट बाहिरी किताबमा हातपर्दा पहिलोखेपमै राम्रै लेखकलाई छुइएछ । छुइएछ पो भनेँ है; पढिएछ होइन ! भोल्टेयरलाई पढेर बुझ्न सक्ने उमेर कहाँ हुनु त्यो ? जुँगाको रेखी पनि नबसेको बेला । हो उतिबेलै । तल्लोघरको चोटामा थुपारिएको धुस्नोमाथि उत्तानो परेर पढेको हो ‘कैण्डिड’ । अहिले त किताबले पारेको तत्कालिन प्रभाव र त्यसभित्रका छिटफुट दृश्यमात्र पो झझल्कोमा छन् । भेटे फेरि पो पढ्थेँ बरू । प्रकाशकमा उल्लेख थियो ‘रायल नेपाल एकेडेमी’ । त्यसको मूल्य र अनुवादकको नाम पनि अझै सम्झनामा रहेछ । मूल्य यसकारण सम्झना भयो; त्यो सम्झन लायक थियो- रु. १।- । अनुवादकको नाम भने कसरी सम्झिरहेँ थाहा छैन । अधिकांश नामहरू प्राय नसम्झने मैले ती फणिन्द्रप्रसादलाई त सम्झेकै रहेछु । बरू त्यसबेला कृतिका लेखक भोल्टेयरलाई सम्झँन भने मैले छिमेकी गाउँ ‘भोल्टार’को नामको सहारा लिएको थिएँ । खासमा भोर्लेटारको अपभ्रमित रुप हो रे ‘भोल्टार’ । ‘भोल्टार’- भोल्टेयर । सम्झन निकै सहज भएथ्यो ।
माटोमै जीवन बिताउने किसानको परिवारमा किताबसित कम माटोसित बढी हिमचिम राख्नु पर्ने वाध्यता थियो । अहिलेसम्मै पनि छ भनौं । त्यसो नहुँदो हो त देशको नामका अगाडि ‘कृषिप्रधान’ विशेषण कसरी झुन्डन्थ्यो होला र ? तर किशोर छँदासम्म पनि मेरो शरीर थियो मुरली स्वरुपको । झीनो । सायद त्यसैले होला शारिरीक श्रमका निम्ति अस्वीकृत हुन्थेँ । बरु म निरन्तर गोठालो र बाँदर कुरुवामा खटाइन्थेँ । हुन त यतिबेला मैले किताब पढ्न थाल्दाका क्षणहरू सम्झन खोजेको हो । तर यसोगर्दा सम्झनामा त्यसबखतका दृश्य र गन्ध समेत झुल्कन खोज्दै पो छन् त । यसरी दृश्य र गन्धको सहारा लिन खोज्नुमा मेरो स्वार्थ लुकेको छ । आफूलाई छोप्ने स्वार्थ । नत्र त किताबका विषयवस्तु र तिनको गहिराइमा पुगेर त्यसबाट प्राप्त भएको ज्ञानको बखान सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन मसित छँदैछैन त्यो भएजस्तो गरेर किन ढोङ् गरूँ ? बरू त्यो बेलाको परिवेशको मात्र सम्झना गर्‍यो र सुटुक्क उम्कियो । म त्यही उम्कने तरिका अप्नाउँदै छु है ।
चित्र: नागरिक, अक्षर
धुस्नोमा पल्टेर ‘कैण्डिड’को पाना पल्टाउनु ठीक पहिले मैले झ्यालबाट बाहिर निहारेको थिएँ । छेउमै हाँगाभरि जाहीका पहेला फूल । भुनभुनाउदै गरेका माहुरीहरू । माहुरीको हल्का स्पर्शले समेत हाँगाबाट छुटेर भुईँ झर्ने केही फूल । त्यसको एकदिन पहिले पो होला । झरेका फूललाई फेरि हाँगामा टाँस्न खोज्ने म । बुझ्नु भयो ? प्रकृतिको त्यो सामन्य नियमको समेत चेत नखुलेको मैले के बुझेर पल्टाएँ होला ‘कैण्डिड’ ? तर मैले त्यही दिन धुस्नोमै पल्टेर सबै पाना छोएँ त्यस किताबका ।
साँच्चै मैले भोल्टेयरपछि कुन लेखकलाई छोएँ हँ ? सायद केही दिनकै अन्तरमा होला । मैले अर्को कुनै किताबको सुगन्ध पनि सुँघेको थिएँ । किताबको पन्ना पल्टाउँदा निक्लने सुगन्ध मलाई आजभोलि पनि मन पर्छ । उतिबेला खासगरि रुसी साहित्यका किताबमा विशेष खाले वास्ना भेट्थेँ । फरक देशका फरक किताबका फरक सुगन्ध । दोस्रो किताबको सुगन्धमा त धुवाँको वास्ना पनि मिसिएको थियो । त्यसबेलाका चुलामा दाउरामात्र त बल्थे । उतिस, शिरिश, सल्लो, कटुष र अझ के के । ती अनेकौं गन्धको मिश्रण थियो त्यस किताबका पन्नामा । ( यो गन्ध र सुगन्धको प्रसंगलाई कुनै बिम्बात्मक भावना लुकाउन खोजेको अर्थमा भने पटक्कै नलिइदिन आग्रह है ! त्यसो गर्दा अनर्थ लाग्ने सम्भावना देख्छु ।) पुरानो खाले घरको धुवाँले बाहिर निस्कने सहज बाटो भेटेन सायद । छिर्‍यो किताबका पन्नाभित्र । धन्य धुवाँ ! मैले आफ्नो स्मृतिमा रहेको तेरो त्यही मिश्रित गन्धको अनुभूतिले अहिले सम्झिएँ- ‘कुम्भे’ । ‘नाट्रिड्यामको कुम्भे’- भिक्टर ह्युगोको ‘द हन्चब्याक अफ नोड्रडम’को नेपाली अनुवाद । धन्य ऋद्धिबहादुर मल्ल ! मैले बारीको डिलको छाप्रोमा बसेर छुन पाएँ भिक्टर ह्युगो र ‘नाट्रिड्यामको कुम्भे’लाई । उपन्यासको मूल पात्र ‘क्विसिमोडो’ले मस्तिष्कमा बढो अद्भूत स्वरुप धारण गरेथ्यो । ह्युगोको त्यही पात्रलाई निकैपछि थुप्रै फिल्ममा उतारेको देखेँ । सोचेभन्दा अलिक अग्लो । तर शारीरीक स्वरुप झण्डै झण्डै मैले कल्पेजस्तै । किताबमा पढेका पात्र यसरी फिल्ममा देखेपछि लागेथ्यो- लेखकहरू त अक्षरको बाटो हुँदै हिंड्ने चित्रकार पनि पो रहेछन् । निर्देशक त केबल कुशल पाठक पो । म त परेँ एउटा सामान्य पाठक । कुशल पाठक हुन्थेँ भने त संगीतकारको अतिरिक्त फिल्म निर्देशकको विशेषण पनि भिरी सकेको पो हुन्थेँ कि ? किताब पढ्दै गर्दा कथाको गहिराईमा पुगेपछि आफूलाई मन पर्ने पात्रभित्र म आफैँ प्रवेश हुन्थेँ र मनमनैको अभिनेता पनि पो हुन्थेँ त । भनौं- लेखकले मलाई त्यस्तो गर्न वाध्य बनाउथे । यस्तो त उही प्रारम्भिक बेलामा अलि बढी हुन्थ्यो । अहिले भने अलि कम हुन्छ । त्यो अनुभूति यसरी कम हुनुमा मेरो पाठक-मनमा आलोचनात्मक मस्तिष्कको हस्तक्षेप बढेर पो हो कि ? थाहा छैन । तर उतिबेलै पनि ‘नाट्रिड्यामको कुम्भे’ पढ्दा भने ‘क्विसिमोडो’भित्र भने म प्रवेश गर्न चाहिन । ‘क्विसिमोडो’लाई ह्युगोले साह्रै कुरुप शरीर र स्वरु दिएकोले म उसभित्र पस्न चाहिन । तर्सिएँ । शारिरीक सुन्दरताका सम्वन्धमा म उतिबेलैदेखि संकृर्ण सोच बोक्दोरहेछु कि कसो ? तर ‘क्विसिमोडो’को फ्यान बन्न भने हिचकिचाइन है म ।
सेक्सपियरको ‘ओथेलो’ हातमा लिएर गाई चराउन जंगल पस्दा पो हिचकिचाउने अवस्थामा थिएँ त । जंगली जनावरको डर मनमा बोकेर गोठालो जाने उमेरमा थिएँ । ‘छोरो’ भएकोमा बाहिर निर्भय प्रदर्शन गर्थेँ । मनभित्र कम्पन । नत्र हजूरबाको ‘नामर्द’ शब्दको झापड भेट्ने डर हुन्थ्यो । किताब झोलामा बोकेर गाईको बथानपछि लागेँ । मोटो र दह्रो गाता थियो झैँ लाग्छ ‘ओथेलो’को । अनुवादकको नामका अगाडिका अक्षर भने उडेका थिए या उडाइएका थिए । अनुवादक: केरकार केरकार अनिमात्र ‘शेर’ थियो । यो किताब कुन ‘शेर’ले अनुवाद गरेका हो निकै पछिसम्म खोजिनछु । केही वर्षअघि थाहा पाएँ । पुस्करशमशेर रहेछन् । त्यही अनुवादक ‘शेर’ भएको ‘ओथेलो’ पढ्न सुरु गर्दा एउटा रूखको हाँगाको कापमा बसेको थिएँ । त्यो पनि बाघको डरले । सायद त्यता चितुवालाई नै बाघ भनिन्थ्यो । अझै पनि त्यही पो भनिन्छ होला । निकैपछि थाहा भयो- चितुवा त रूख पनि चढ्दो रहेछ नि ! सुन्दरीजल निकट छहराको-पाखामा रहेको काफलको रूख थियो त्यो । धन्न चितुवाले काफल रुचाउन्न रै’छ । नत्र । हाँगामा देखिएका काफल पनि त कलिलै थिए । टिलिक्क, हरीया र अमीला । त्यसैले पो मेरो मन किताबका पानाबाट हटेनथ्यो होला । मैले त्यसै दिन गाईको गलामा झुण्डिएको घण्टीको पिछा गर्दै केही अन्य रूख चहारेँ र ‘ओथेलो’ सकेँ । ममा यौन चेतनाले मूर्त रुप नलिइसकेकोले पो होला । उसबेला कथाको अन्तरवस्तुमा त्यति राम्ररी प्रवेश गरेनछु । किताब पढीसकेपछि कक्षागत कथा ‘न्याउरी मारी पछुतो’ सम्झेको थिएँ । ‘ओथेलो’ अहिले पनि संसारभर लोकप्रिय छ । यसमाथि बने अनेकौं फिल्म । भए अनगिन्ती नाटक प्रदर्शन । अझैपछि पनि निरन्तरता रहला यो क्रमको । संसारमा शंकालु मनहरूको कहिले पो कमी हुने होला र ? फेरि मनहरू रहुन्जेल शंका पनि त कसरी मेटिएला र खै ? के भविष्यमा मन नभएका मान्छेहरू पनि जन्मलान् र ? त्यसो हो भने त कुन्नी । नत्र त अनेक रुपका शंकालु मनहरू पनि रहिरहने छन् र ‘ओथेलो’जस्ता कृतिहरूको लोकप्रियता पनि रहिरहनेछ निरन्तर । छ नि ! भित्री रुप अलि धेरै बिग्रिएका मन झन् शंकालु हुँदा हुन् कि कसो ? अझ यौन चरित्रका मामलामा त मनहरू अली बढ्तै पनि शंकालु पो हुँदा हुन् त । नत्र ती मनहरूलाई सम्बोधन गर्न किन सेक्सपियरको कृतिको सहारा लिइँदो हो र ? सुनेँ- चरित्रमा धेरै शंका गरिरहने मन बोकेकाहरूलाई अहिले पनि ‘ओथेलो सिन्ड्रोम’ले छोएको बिरामी भनिँदो रहेछ । एउटा कृतिको पात्र यसरी विश्वव्यापी रुपमा स्थापित हुनुलाई लेखन र विषयबस्तु छनोटको चमत्कार नमानी के धर पाउनु र हौ ? सेक्सपियर त्यत्तिकै जमेका हैनन् नि । तिनी जमेरै त यसरी फैलेका रहेछन् ।
कैण्डिड, नाट्रिड्यामको कुम्भे र ओथेलो पढेताकाकै कुरा हो । निरक्षर ठूलीहजूरआमाको मुखबाट मुनामदनका हरफहरू कण्ठस्थ सुनेथेँ- हालका मैला सुनका थैला, के गर्नु धनले ? त्यो थियो हाम्रो आफ्नै घरको लेखनको चमत्कार । देवकोटा पनि त जमेका हुन् नि । ती हाम्रा बूढा पनि लेखनमा जमेकैले यसरी फैलन सकेका त हुन् । निरक्षर एउटी गाउँले आइमाईको मुखबाट देवकोटाको कृति सुन्नु चमत्कारिक फैलाइ नै त हो । अनुवाद साहित्यबाट सुरु भएको मेरो पाठक यत्रा तिनै जमेर फैलेका देवकोटाको मुनामदनबाट प्रारम्भ हुनपुगेछ ।
त्यसका हरफलाई कसरी पढेँ ? अनेक खेप अनेक भाका र अनेक परिवेशमा । सम्झेको एउटा परिवेश- सुन्दरीजल ‘ड्याम’को माथिल्लो भित्तोमा एउटा सानो विश्राम गृह थियो । सायद अझै पनि छ होला ? राणाहरूले आफ्नो यात्राको बखत सुस्ताउन बनाएका रे । एक दिन म र मेरा साथीहरू कुमार र गोविन्द त्यो पाटीभित्र पुगेथ्यौं । उनीहरू कहाँबाट त्यहाँ पुगे ? थाहा पाइन । म त गोठालो गएकै बखत तिनलाई भेट्न पारीसम्म पो पुगेथेँ कि ? तीनैजनाले भाका हालेर गाएको मुनामदनका हरफ अझै सम्झन्छु- पानीले पार्‍यो आकाश नीलो, पखाली तुवाँलो । त्यो तत्काल त्यहीँ सिर्जेको नयाँ भाका थियो । तर बिलकुल मौलिक भने होइन । सायद रेडियोमा कसैले गाएको भाकाको अनुकरण गर्दा कागताली परेर बनेको नयाँ भाका । हामीले खुल्ला र उन्मुक्त स्वरले गाउँदा झ्यालबाट देखिएको बाहिरको दृश्य अद्भूत मनोरम थियो । अलिअलि घामको किरण मिसिएको उन्मुक्त वर्षा । हामीले जति ठूलो स्वरले गाए पनि बाहिरका कसैले सुन्न नसक्ने झरीको एकनासे झरझराहट । त्यसदिनको प्रभावले नै हो कुञ्जिनी, शाकुन्तल, सुलोचना लगायतका देवकोटाका कृतिलाई पढ्दा भाका हालेर पढ्न मन लागेथ्यो । भाका हालेर पढ्दा गला अबरुद्ध हुने धेरै हरफहरू भेटिन्थे । त्यसरी भक्कानो छुट्ने हरफमा कहिल्यै नबिर्सने हरफ भने कविवर माधव घिमिरेको गौरीभित्रको ‘हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सँगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि’ थियो । जंगलमा एक्लै हुँदा रुन पनि सजिलो ! नलजाइकन निर्धक्क । रुन पाउनु त त्यस्तो पो । गोठालाले जस्तो । जंगलको सुनसान एकान्तमा । गाउँ शहरमा त रुन पनि लुक्नु पर्छ । फेरि रुवाई र आँसुमा पनि कहाँ एकरुपता हुने रहेछ र ? ‘म हारेँ ! म डुबेँ ! म सकिएँ’को रुवाई र आँसु । अनि कविता, गीत र साहित्यको मर्मले छुँदाको रुवाई र आँसु । एक्कै खाले हुन सक्छन् ? बिलकुल फरक समयका फरक सम्वेदना । फरक आँसु । किताब पढेर गह नरसाएका भए मैले एक खाले रोदन र आँसुको अनुभवबाट पूरै बन्चित हुनु पर्ने रहेछ । म अहिले दुबै अवस्थाको रुवाई र आँसुको अनुभव बटुलेर परिपक्व पो भएको छु त । यसो भनेर मैले आफूलाई वियोगीको दर्जामा सीमान्तकृत गर्न खोजेको नठानियोस है ! म खुसीमा सुन्दरता पूर्वक मुस्कुराउन पनि त कनजुस्याइँ गर्दिन नि । अहिले सोच्छु- मस्तिष्कलाई ज्ञानी बनाउन मात्र होइन सम्वेदनाका अनेक कुनाकाप्चालाई स्पर्श गराउन समेत पढिँदो रहेछ ।
किशोर अवस्थाको मध्यतिर गोठाले जीवनबाट मुक्ति पाउँदा भने हातमा धनुषचन्द्रको ‘घामका पाइला’ थियो कि झैँ ठान्छु । मैले ‘घामका पाइला’सितै आफ्ना पाइलालाई शहर भित्र्याएँ सायद । शहर बनजस्तो थोरै किताबमा चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ हो रहेछ र ? यहाँ पुगेर त भेटिए अनेकौं किताब, अनेकौं लेखक । प्रत्यक्ष । अप्रत्यक्ष । शहर पसेको पहिलो चरणमा आफ्नाका लगायत, रसियन, हिन्दी अँग्रेजीका बग्रेल्ती किताबै किताब । फेरिएको नौलो परिवेश । न धुस्नो न दाउरा । न बाघ न चितुवा । न जाही न जुही । कहिले पलङमा उत्तानो परेर । कहिले मेचमा अडेसिएर । यहाँ पुगेपछि पो धेरै किताब लेखक र किताबहरू छुइएछ । हो अझै पनि छुइएछ र छुइँदैछ नै भन्नु उचित ठान्छु । बुझ्ने त प्रयाससम्म न हो ।
(नागरिक दैनिक, अक्षरमा प्रकाशित)
View Comments	मनको पुकार
Posted by Aavaas In songs
कसैले त सुनी देला भित्री मनको पुकार
धरमरिएँ लडखडाएँ लौ न गुहार गुहार
एक्लै एक्लै हिंडेको म शिखर चढ्छु भनी
पाइला यतै अल्झिदियो दु:खी फेद मुनी
उजाड यो मौसमलाई केको सोह्र-सृंगार
पाखाभरि सुनाखरी आँखाभरि साउन
मान्दै बसेँ यी आँसुमा व्यथा बग्दै जाउन
सक्दिँन भो थाम्न अब झिनो पनि प्रहार
केही यस्ता आकस्मिकता
‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगले बहकिँदा
new album @ market
CRBT code No. of ‘Lamppost’
Bishnu on गजल शैलीको गीतBibek pathak on पाहुनाको कलमChij Gurung on ‘एन्जाइटी’ याने उद्वेगले बहकिँदाrejina rai on CRBT code No. of ‘Lamppost’Sampang Sanzu on मनको पुकारPadam Gautam on स्त्री देहKamala on तिमीभित्रMitha RamSapkota on तिमीभित्रashok pradhan on तिमीभित्रnikunja sharma on मनको पुकारnikunja sharma on गजल शैलीको गीतrc on तिमीभित्रrc on गजल शैलीको गीतrc on गोरेटो र देउताका बीच हुँदैshrestha Samanshree on कमिज डट कम
नेपाली समय-Nepal Time